Ukuhambelana kweTaurus kunye ne-Aquarius kuthando, ubudlelwane kunye nesondo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kweTaurus kunye ne-Aquarius kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Ukuhambelana kweTaurus kunye ne-Aquarius kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Ngelixa zinokubonakala zingaqhelekanga njengabathandi, i-Taurus kunye ne-Aquarius zine-chemistry kunye nendlela eyahlukileyo yokunxibelelana. Ngabo, ngumba wexesha kunayo nantoni na eyenye. Ukuba i-Aquarius ikulungele ukubandakanyeka kwinto enzulu, isidingo seTaurus sokuzinza kunye nokhuseleko sinokuvela kwangoko.
Iikhrayitheriya Isishwankathelo sesiGanga seTaurus Aquarius
Unxibelelwano Ngaphantsi kwe-avareji ❤ ❤
Amaxabiso aqhelekileyo Umyinge ❤ ❤ ❤
Ubudlelwane beTaurus-Aquarius buya kuguquka njani buya kuxhomekeka kakhulu kwisithandwa sika-Aquarius simahla nesingazinzanga. Ngemihla yabo yokuqala, aba babini baya kuthetha malunga neendaba kunye nemicimbi yezopolitiko yakutshanje. I-Taurus ayisiyonto ithethayo, kodwa i-Aquarius injalo, ke baya konwaba ngakumbi ukuthatha incoko.
I-Aquarius ihlala inomdla kwimiceli mngeni emitsha kunye notshintsho. Xa bedibana nomthandi weTaurus, banokuziva ukuba zendele njani kwaye zizinzile iBull.
yintoni uZodiac ngoFebruwari 20
Xa iTaurus kunye neAquarius bethandana…
I-Taurus kunye ne-Aquarius othandweni zinokuphikisana kakhulu. I-Taurus ikholelwa kakhulu kumaxabiso osapho, ngelixa i-Aquarius ingenakuyiqonda kakuhle yonke le nto. Ungayichazanga eyokuqala uthanda umlo olungileyo amaxesha ngamaxesha, into engekhoyo kwaphela ekuthandeni i-Aquarius. Uphawu lomoya, i-Aquarius inokuba neemvakalelo ezixubeneyo kwaye ibe sisiphithiphithi njengomthandi ukuze ungothuki ukuba uyakhala, uhleka kwaye uyalila, zonke ngaxeshanye.
Bobabini banekratshi, kuya kuba nzima ku-Aquarius naseTaurus ukuba bavume ukuba bayathandana. Bangabalinganiswa abahluke kakhulu ngokubanzi, nangona kunjalo, i-chemistry phakathi kwabo ikhona, nokuba yeyokwexeshana.
I-Taurus inochuku kwaye inomsindo, ngelixa i-Aquarius ibanda kwaye inentloko epholileyo. U-Aquarius uya kuthi, ngaxa lithile, akhulule ukuthanda kwakhe, kodwa kuphela xa iTaurus ityhiliza amaqhosha akhe ukuya kwinqanaba apho angakwaziyo ukuthatha khona.
Inkunzi iya kuthuliswa yi-Aquarius xa izinto ziya kuba shushu kwaye zixinene. Kuyenzeka ukuba baqondane, kodwa kuphela ngemizamo kunye nolungelelwaniso oluthile. Kuyenzeka ukuba babe kunye ixesha elide, kodwa kuphela ukuba bakulungele ukutyala iinzame ezithile kubudlelwane.
Kuthatha ixesha elininzi kunye neenzame ezizinzileyo zokwenza ukuba iTaurus iguquguquke ngakumbi kwaye i-Aquarius ibe noxanduva ngakumbi. Kuphela kusemva kokuba bobabini betshintshe iindlela zabo, baya kuba nethuba kubudlelwane obuhlala ixesha elide.
Ngokukhawuleza nje ukuba bakwazi ukoyisa yonke le miqobo kwaye isibini, iTaurus kunye ne-Aquarius bazokuncedisana, kube nzima ukuyaphula. Baza konwaba kunye, bonwabele ixesha abalichithe nomnye.
I-Taurus iya kuba nothando kunye nenkanuko, ngelixa i-Aquarius izakudlala lowo ungenakufikeleleka ngokulula. Isimo sengqondo sika-Aquarius siya kuhlala senza iTaurus ikhwele. Kodwa ngentetho emnandi, baya kuyisombulula le ngxaki. Zombini ezi mpawu zinenkani, ke baya kulwa ngezinto ezingenamsebenzi.
Ubudlelwane beTaurus kunye neAquarius
Abantu baya kucinga ukuba ezi zimbini azithandani, kwaye baya kudideka kakhulu kwinto yokuba bekunye.
Kodwa uthando aluboni, kwaye eli lizwi lisebenza kakhulu kwinto iTaurus kunye ne-Aquarius abanayo. Baza kuxhasana kwaye babe neqhayiya ngobuhlobo babo, nokuba bangajongeka kanjani ingaqhelekanga emehlweni abanye.
I-Aquarius kunye neTaurus bayakwazi ukuzisa into embi ngamanye amaxesha. Baza kulwa kwaye bahlukane amaxesha amaninzi.
I-virgo ibhinqa iphosa umdla womntu
I-Taurus ithanda izinto eziphathekayo kunye nomthengi omkhulu, kwaye i-Aquarius iya kumgweba ngenxa yoku. I-Taurus iya kufuna ukucaphukisa iqabane labo ngaphandle kokujonga naziphi na iimvakalelo ezinokwenzakala endleleni.
Indawo efanelekileyo kunye nekhaya ziya kuba yindawo apho iTaurus ikhathalela indawo kunye nosapho kunye ne-Aquarius isebenza kunyango lwesifo esinqabileyo kwigaraji.
Inye into eqinisekileyo: aba babini bafumanisa ukuba banomdla kwaye banomdla kwinto eyenzekayo phakathi kwabo. Njengabahlobo, abantu osebenza nabo okanye izalamane, baya kukuxabisa kwaye benze omnye nomnye ahleke kakhulu. Njengamaqabane eshishini, elowo uya kuzisa iseti yezakhono zakhe etafileni, kwaye benze ubudlelwane babo bube yimpumelelo.
Kodwa njengabathandi, izinto azinakuba lula ngezi zinto zimbini. I-Taurus ifuna ukuzinikela kunye nokunyaniseka kwaye i-Aquarius ayinakukubonelela. Kuphela ngexesha, baya kuthi bakwazi ukwakha into kunye kwaye emva koko, izinto ziya kuba yingozi.
Ukuhambelana komtshato weTaurus kunye neAquarius
Ukuba baya kukwazi ukuhlala kunye njengabathandi ixesha elide, iTaurus kunye ne-Aquarius baya kutshata. I-Aquarius ayinakucinga nokucinga ngayo, kodwa iTaurus iya kuyizisa kwingxoxo.
Baya kuba neengxaki zokucwangcisa umtshato njengoko iTaurus iyimveli kwaye i-Aquarius ifuna into engaqhelekanga. Lo ngumzuzu olungileyo wokuba baqale ukulalanisa.
Ikhaya labo liya kuba nefenitshala yexabiso eliphambili kunye nenkqubo yokonga amandla. Baya kuba nezilwanyana ezininzi ezihlangulwe kwiindawo zokuhlala kunye neencwadi ezibalulekileyo zeTaurus.
Ukuthatha isigqibo sokuba nabantwana yenye ingxaki kubo. I-Aquarius iya kubaleka kule ncoko, ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona, iTaurus kufuneka yenze inyathelo lokuqala ize nesiphelo.
Njengabazali, bobabini baya kuba noxanduva kwaye banike abantwana babo ukonwaba ebuntwaneni. Baya kugcina iinkumbulo zabo zobuntwana ziphila, kwaye bafundise abantwana babo imidlalo eyahlukeneyo ukusukela xa babebancinci ngokwabo.
I-Aquarius iya kubenza abantwana babo bazi malunga nenqanaba labo ekuhlaleni kwaye banxanelwe ulwazi, ngelixa iTaurus iya kubonelela ngayo yonke into abayifunayo kwikhaya elitofotofo nokhuseleko.
I-Aquarius sisicazululi esihle sezinto ngelixa iqabane labo linobuchule kuzo kodwa lifuna uzinzo kunayo nayiphi na enye into. Apho iTaurus ithanda ikhaya nemali, i-Aquarius ifuna ukuzula simahla kwaye ichithe kangangoko kunokwenzeka. Iya kuba yinto eqhelekileyo ukuba le yokugqibela ivele ngamanye amaxesha, ukuleqa umceli mngeni othile. Baya kuphumelela kubudlelwane kuphela xa bezibophelela omnye komnye.
U-Aquarius ubona isini njengendlela yokulinga kwaye angazibandakanyi. I-Taurus ine-libido ephezulu kwaye ithanda imidlalo ye-erotic. Ukwabelana ngesondo phakathi kwabo kuya kuba kokwenyama kwaye kuya kusilela ukuthintela.
Kwi-Aquarius, eyona mimandla ye-erogenous yimilenze kunye namaqatha, ngelixa iTaurus imalunga nentamo.
Endaweni yokuba neqabane elingazinikeliyo kwaye lizinzile, iTaurus ikhetha ukuba yodwa. Okwangoku, i-Aquarius ifuna ukuxoxa malunga nayo yonke into.
Kwakhona, le yokugqibela ifuna ukuqonda ukuba iTaurus ifuna ukukhuthazwa ngokwengqondo nangokwasemzimbeni. Kwigumbi lokulala, i-Aquarius iyacinga kwaye inomdla ngokwenene kwaye bafuna ukuba neqabane elifana nabo engxoweni.
Ukwenza uthando ngumsebenzi onomdla kwisibini esitshatileyo se-Aquarius-Taurus kwaye iqabane ngalinye liza kuza negalelo elibalulekileyo ekwenzeni izinto zigqibelele.
Iingxaki zisenokubonakala xa umhlaba weTaurus uza kuqaphela ukuba iAirarius yomoya ayikhathali kakhulu ngentuthuzelo. I-Taurus inothando, i-Aquarius ayiqondi kakuhle iimvakalelo kwaye ayizukuvumela abantu basondele kakhulu. Bobabini baneenkani kwaye abafuni kulalanisa. Ukuhambelana kwabo kubuzwa ngumahluko omkhulu phakathi kwabo. Baza kusebenza ngcono njengabahlobo okanye amaqabane eshishini.
I-Taurus iyabandakanyeka kwaye iyazinikezela, ngelixa i-Aquarius ikhutshiwe kwaye ikhululekile. Inkunzi iya kuhlala inomona kwaye oku kuya kuyikhathaza i-Aquarius. Kunzima kakhulu kuBaphathi baManzi ukuba banyamezele ubunini kunye nomona.
I-Taurus inokucinga ukuba i-Aquarius ineengcamango ezininzi kwaye izimele kakhulu. Kodwa oku akuthethi ukuba akunakwenzeka ukuba babe kunye. Xa i-Aquarius iya kufuna ukuthatha uhambo lokujikeleza umhlaba, iBull iya kubona bomvu phambi kwamehlo abo.
I-Taurus luphawu olufuna ukuba nozinzo ngokweemvakalelo nakwezemali. Rhoqo, isibini saseTaurus-Aquarius siyakuphikisana ngezinto abanye abantu abangazukuxoxa. Ngenxa yokuba bobabini bemiqondiso esisigxina, abayi kwamkela izimvo ezahlukeneyo.
I-Aquarius, njengaye wonke umntu, ineentsilelo zayo, njengokuzonwabisa kwaye ngenxa yesi sizathu, inokwenza izigwebo ngokulula nangokukhawuleza. Ngaphezulu kwayo yonke enye into, i-Aquarius ifuna ukuba simahla kwaye ingahlali ixesha elide.
Ayikwazi ukuveza izimvo zabo ngaphandle kokubonakala ngathi bagweba, aba babini baya kulwa kakhulu. I-Taurus iya kufuna ukuba nengxoxo ephikisanayo, ngelixa i-Aquarius iya kuthintela ukungqubana ngayo nayiphi na indleko. Ukuba bobabini bebekwazi ukumamela omnye nomnye, bangonwaba ngakumbi.
leo umfazi emva kokuqhekeka
Umahluko wabo ubenza babe sisibini esinomdla, kodwa njengoko bekuxoxiwe ngaphambili, bahlala bekhokelela kwimilo. I-Taurus imalunga nesiko, into eya kucaphukisa i-Aquarius engaqhelekanga, enezinto ezintsha ezinendawo yobukrelekrele abahlala kuyo kwaye ngaphezulu koku, iTaurus inqwenela ukubonwa komzimba.
Yintoni ekufuneka uyikhumbule ngeTaurus kunye neAquarius
I-Taurus kunye ne-Aquarius ziimpawu ezizinzileyo, oko kuthetha ukuba aba babini bayazi kakuhle ukuba bafuna ntoni ebomini, ukuba abalwamkeli utshintsho ngokulula kwaye abathandi ukuhamba-hamba kakhulu. Ikwathetha ukuba kufuneka babe nendawo yabo kwaye baqiniseke ngento abanayo.
Bobabini i-Taurus kunye ne-Aquarius abayithandi ukuchitha ixesha bodwa kwaye abavumeli abanye babalawule. I-Taurus iya kunika i-Aquarius engenasiphelo isithuba esifunayo, ngelixa i-Aquarius izakuvumela iBull ijolise kwikhondo lomsebenzi wayo.
Aba babini abaphikisani kwi-zodiac, kodwa banobuntu obuchaseneyo, oko kuyinyani kwaye oku kunokubangela ukuba ubudlelwane phakathi kwabo bonakalise. Njengabathandi, iTaurus kunye ne-Aquarius azihambelani kakhulu kwithiyori kuba ngamnye ujonga ubomi ngokwahlukileyo.
I-Aquarius ngumbono we-zodiac, lowo uneengcamango ezintsha kwaye ufuna ukuthatha imiceli mngeni emitsha. I-Taurus ngumthandi, oya kufuna ubomi obuzinzileyo kwaye aqheleke kakhulu. Umthandi uya kufumana kunzima ukujongana nendlela yokuphila yombonisi kunye nesimo sengqondo sokungakhethi.
Kunzima kakhulu ukuqikelela ukuba i-Aquarius izakwenza ntoni ngokulandelayo. Abantu abakulo mqondiso bayayithiya inkqubo kwaye bafuna izinto ezahlukeneyo ukuze bonwabe.
Ubudlelwane be-Aquarius-Taurus buza kusebenza kuphela ukuba amaqabane aya kuba nentando yokuphumelela. Banokufunda izinto ezininzi omnye komnye: I-Aquarius iya kubonisa iBull ilizwe likhulu kwaye ligcwele amathuba, konke oku ngelixa kuthambisa ukuzingca kwakhe. Ukubuya, ukusebenziseka kweTaurus kuya kunceda i-Aquarius ibe yinto ebambekayo.
I-Aquarius ifuna umntu ofana nelitye ecaleni kwakhe. Nangona kunjalo, nokuba bangazama kangakanani aba babini, ubuntu babo bokwenyani buza kuvela kwaye baya kugqiba ukuba abahambelani.
Abemi baseTaurus banomona kwaye banobutyebi, into abathi oogxa babo base-Aquarius bayithiye kakhulu kwabanye, ngakumbi kuba baluphawu lwenkululeko kunye nokuzimela. Xa i-Bull izakuzama ukwenza ukuba uMthwali waManzi azibophelele, le yokugqibela ayizukukwazi ukuba leliphi icala eliza kuthatha ukuze lifike kangangoko kunokwenzeka. Kwaye ke, iTaurus ngokucacileyo iya kwenzakala.
I-Taurus Ethandweni: Ngaba Ihambelana Nawe?
U-Aquarius othandweni: Ngaba ihambelana njani nawe?
Wazalwa ngo-1988 i-zodiac yamaTshayina
Izinto eziphambili ezili-10 zokwazi ngaphambi kokuDibana neTaurus
Izinto eziphambili ezi-9 zokwazi ngaphambi kokuDibana ne-Aquarius
IVenus kwiNkosikazi yeScorpio: Mazi ngcono
UPluto kwi-Sagittarius: Ubenza njani uBuntu bakho kunye noBomi bakho
Iimpawu zeZodiac zikaMeyi 22
uphawu lwe zodiac lwangoJanuwari 21
do amadoda oonomadudwane abuyile
uyiphatha njani indoda ye-taurus ebhedini
uyenza njani indoda yomhlaza ikufune ubuye
iimars kwindlu yesi-2